Iyo yakawanda mvura haisi iyo iri nani！
Mhedzisiro yakakosha yemvura pakukura kwezvirimwa: 1. Mvura chikamu chemuti; 2. Kugona kuchengetedza chimiro chemuti wemiti: Mvura inotora chikamu muphotosynthesis, kufema, synthesis uye kuora kwezvinhu zvakasikwa. 3. Mvura ndiyo solvent yezvirimwa ...
Sarudza Micro Irrigation system, chengetedza madonhwe ese emvura!
Kubva kutanga kwegore rino, dzakawanda zvekurima zvigadzirwa zvinotengesa nyika pasi rese zvakatambura nekusanaya kwemvura, izvo zvakakonzera zvakanyanya hupfumi hwepasi rose. Semuenzaniso, United States neBrazil vakatambura nekusanaya kwakakomba. Gorosi, chibage ...
Kudiridza kwekudonha kuri nani pane vanosasa mvura
Kudiridza kwekusasa mvura, ndiko kuti, spray kudiridza, inzira yekudiridza yepamberi iyo inoshandisa seti yemidziyo yakakosha kupuruzira mvura pasi pekumanikidzwa kuenda mumhepo, ichiumba tumadonhwe tudiki, semvura, yakadururwa zvakaenzana pamunda wakarimwa ...
Mazano ekuti ungashandise sei iyo miviri mitsara yekudonhera yekudiridza tepi!
1.Kana kudonhedza tepi yekudiridza inoshandiswa pasi peiyo yekurima firimu, nekuda kwechiedza chezuva, pamusoro pemvura inozobuda, uye inozonamira mumadonhwe madiki emvura mufirimu rekurima. Aya madonhwe emvura madiki anozoita lens. Pasi penzvimbo yakakodzera uye sunlig ...